Mandraisa an-tserasera an-tserasera - Sekolin'ny teny Central, Cambridge
Azafady azafady na jereo ny saha rehetra takiana!
Raha te-hiditra amin'ny sekoly ianao, azafady:
Fenoy ny taratasy eto ambany ary alefaso any amin'ny sekoly ny fangatahanao.
Aloavy ny fametrahana (herinandro 1 mazava ho azy sy ny saram-piantohana momba ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny saram-pidirana fampiantranoana raha azo atao) ary dia hamay ny fandaharanareo ary handamina ny trano
Hanamafy ny fianaranao sy ny fandraisanao izahay rehefa mandray ny fangatahanareo ary handefa anao ny taratasy fanekena. Ireo mpianatra tsy mila EU dia mila izany mba hahazoana fahazoan-dàlana hidirana UK.
Azafady mba lazao anay ny anaranao!
Azafady mba lazao anay ny anaranao na ny anaran'ny fianakaviana!
Tsy maintsy fenoina ity saha ity.
tsy mety dreninao
Zip / Postcode:*
Alefaso azafadyAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaTendrontany AtsimoAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaao ArubaAostraliaAotrisyAzerbaijanBahamasyBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBolivia, Plurinational State nyBonaire, Sint SAIPAN sy SabaBosnia sy HerzegovinaBotsoanaBouvet IslandBrezilaBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBolgariaBorkina FasoBurundiKambodzaKameronaKanadaCape VerdeCayman IslandsRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaKrismasy IslandCocos (Keeling) NosyKolombiaComoresCongoCongo, Repoblika Demokratikan'iNosy CookCosta RicaCote d'IvoireKroasiaKiobàCuraçaoSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaEkoateraEjiptaEl SalvadorGinea GineaEritreaEstoniaEthiopiaNosy Falkland (Malvinas)Faroe IslandsFidjiFailandyFrantsaGuyanePôlinezia frantsayFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGresyGroenlandyGrenadyGoadelopyGuamGuatemalaGuernseyGineaGuinée-BissauGoianaHaitiNandre Island ary McDonald IslandsJereo Masina (Vatican City State)HondurasHong KongHongriaIslandyIndiaIndoneziaIran, Repoblika Islamika nyIrakIrlandyIsle of ManIsiraelyItaliaJamaikaJapanaJerseyJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKorea, Repoblika Demokratika ny olona nyKorea, Republic ofKoetyKyrgyzstanLao ny Repoblika Demokratikan'i PeopleLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgMacaoMakedonia, Repoblika Iogoslavy teo alohaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaNosy MarshallMartiniqueMaoritaniaMaorisyMayotteMeksikaMikronezia, Federated States ofMoldavia, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalPays-BasNew CaledoniaNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorvezyOmanPakistanPalauPalestiniana Territory, OccupiedPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeròFilipinaPitcairnPoloninaPortiogalyPuerto RicoQatarReunionRomaniaFederasiona RosianaRwandaSaint BarthelemySaint Helena, Ascension ary Tristan Da CunhaSaint Kitts sy NevisSaint LuciaSaint Martin (Partie Française)Saint Pierre sy MiquelonSaint Vincent sy GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome sy PrincipeArabia SaoditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Partie néerlandais)SlovakiaSloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoSouth Georgia ary Atsimo Andrefan'i SandwichSodàna AtsimoEspainaSri LankaSodànaSurinameSvalbard sy Jan MayenSoazilandySoedaSoisaRepoblika Arabo SyrianaTaiwan, Province ShinaTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanNosy Turks sy CaicosTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafanjakana mitambatraEtazoniaUnited States Minor lavitra IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezoela, Bolivariana Republic ofViet NamVirgin Islands, BritanikaVirgin Islands, USWallis sy FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbaboe Tsy maintsy fenoina ity saha ity.
Ampidiro azafady ny adiresy imailaka feno anao, ohatra, name@example.com. Ny nomeraon-telefaoninao sy ny adiresy mailaka dia tsy hizara amin'ny antoko fahatelo. Ny fampahalalanao dia voararan'ny Politika momba ny tsiambaratelo.
Ampahafantaro ny adiresy mailakao:*
Tsy maintsy fenoina ity saha ity. Azafady azafady dia mifanaraka amin'ilay faritra etsy ambony.
Anarana momba ny vonjy taitra:*
Azafady azafady ny anaran'ny olona iray azontsika ifandraisana amin'ny hamehana. Mety ho mpikambana na namana izany.
Hafatry ny mpampiasa fitsaboana:*
Azafady omena ny nomeraon-telefaona amin'ny fifandraisana an-tànana.
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Month010203040506070809101112 / taona1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 tsy mety dreninao
Fibodoana / Fiekem:
Azafady mba lazao anay ny naheno anao voalohany*
Eto dia ilazao aminay ny karazana fianarana tianao atao, fotoana sy fotoana.
Mifidiana azafady ny karazan-tsarinao*
Anglisy ankapobeny - fampianarana 15 oraAnglisy mavitrika - fampianarana 21 oraFampianarana atoandro - fampianarana 6 oraIELTS hariva hariva - fampianarana 6 oraFampianarana vao maraina - fampianarana 4.5 ora tsy mety dreninao
Azafady misafidiana izay lalana tianao hiditra.
Rahoviana ianao no hanomboka? Matetika dia alatsinainy izany*
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Month010203040506070809101112 / taona20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 tsy mety dreninao
Rahoviana ianao no te ho vita? Matetika izany Zoma izany*
Firy herinandro no tianao hianarana?*
Firy taona no nianaranao tamin'ny teny Anglisy:
Inona no fitsapana nataonao anglisy?
Inona avy ireo tanjonao?
Ohatra: Fanadinadinana tianao atao (PET, FEC, CAE, CPE, IELTS?) Na ho an'ny fifandraisana ankapobeny.
Manolotra trano fandraisam-bahiny izahay na afaka mandamina ny azy manokana ho an'ny fijanonanao any Angletera.
Ho fampahalalana misimisy kokoa momba ny trano fandraisam-bahiny sy ny karazana fandraisam-bahiny, tsidiho azafady ny pejy homestay.
Mety ho tonga amin'ny homestay ny asabotsy na alahady alohan'ny hanombohan'ny dingana.
Mifidiana fialan-tsiny azafady*
Half BoardFandriana sy sakafo marainaLakozia kelyResidential / YMCA (Oniversite)Ny trano misy anao tsy mety dreninao
Fanamarihana: Resaka / YMCA (mpianatra any amin'ny oniversite efa taloha) dia trano fialan-tsasatra ho an'ny tenany ary azo alaina ho an'ny fianarana amin'ny Jolay-Aogositra.
Raha manamboatra ny trano misy anao manokana ianao dia omeo anay ny adiresy:
Rahoviana ianao no tonga any amin'ny trano misy anao? Amin'ny ankapobeny dia alahady izany
Rahoviana ianao no handao ny trano fonenanao? Amin'ny ankapobeny dia asabotsy izany
Mifoka sigara ve ianao?
Mariho azafady: Tsy misy ny tompon-trano fandraisam-bahiny ka mamela ny mpifoka hifoka sigara ao an-trano.
Azafady mba lazao anay momba ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fahasalamana hafa na ny sakafo hafa:
Fees sy fandoavana
Amin'ny fotoan'ny fampiharana dia mety handoa vola na vola feno.
Ny fametrahana ambany indrindra tsy ara-dalàna azo antoka dia ny fandoavam-bola 1 herinandro + fandehanana herinandro 1 + fandoavan-trano fandoavana ny GBP 50.
Raha misafidy ny handoa ny saram-bidinao rehetra ianao dia manisa toy izao: x vola isan-kerinandro (latsaky ny fihenam-bidy) + fonenana x herinandro + GBP 50 sarany famandrihana trano
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny Card, Bank Tansfer, Check na Cash.
Jereo eto ny 'Ahoana ny fisoratana anarana'pejy ho an'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny banky sy momba ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit.
Efa mandoa vola ve ianao izao?*
Ampidiro azafady hoe ohatrinona ny vola laninao ankehitriny:
Alefaso ny fangatahanao
Manamafy aho fa te hianatra any amin'ny Central Language School, Cambridge amin'ireo daty voatondro. Novakiako ary ekeko ny fepetra sy fepetra rehetra amin'ity takelaka ity sy ao amin'ny Brochure / Website. Salama tsara aho ary tsy manana kilema ara-batana na ara-batana afa-tsy amin'ny antsipiriany amin'ny taratasy na mailaka hafa.
Miangavy anao hanamarina fa manaiky ny fanambarana voalaza etsy ambony ianao*
Manaiky aho, azafady ekeo ny taratasy fisoratana anarana! tsy mety dreninao
Manamafy aho fa novakiako ny Politika Privacy ny CLS.
Alefaso azafady mba hanamarina fa efa novakianao ny Politika Privacy an'ny CLS*
Efa namaky ny politikan'ny Privacy ny CLS aho tsy mety dreninao
Ampidiro azafady azafady*
Rehefa maka fotoana hanaovana izany ianao, dia manaporofo fa tena olona ianao. Misaotra anao.
© 2017 Sekolin'ny fiteny afovoany, Cambridge